Jawaabta Uu Solskjaer Ka Helay Halyeey Kooxda Man United Ma U Keeni Kartaa Ciyaartoy Shan Ah? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Manchester United waxay u baahan tahay inay soo iibsato saddex ama afar ciyaartoy si ay u noqoto koox dhamaystiran oo tartan la geli karta kooxaha Liverpool iyo Manchester City Sidaa waxa rumaysan halyeyga Man United ee Paul Scholes.
Scholes waxa uu sheegay in kooxdiisa hore uu isbeddel ku dhacay markii uu yimid Bruno Fernandes bishii January, isla markaana ay sare usoo kacday oo ay fursado u haysato inay horyaalka ku tartami karto, laakiin aanu kalidii sii wadi karin naadiga ee ay u baahan yihiin saddex laacib ama afar kale oo tayadiisa oo kale leh, isla markaana dabooli kara meelaha ay wali ka liicayso Manchester United.
Scholes waxa uu Fernandes barbar-dhigay halyeeyadii hore ee Old Trafford ee Eric Cantona iyo Teddy Sheringham, waxaanu rumaysan yahay in uu United ku yeelan karo saamayntii iyo isbeddelkii ay Kevin de Bruyne iyo David Silva ku yeesheen Manchester City.
“Aniga Burno iila muuqdo ciyaartoy khadka dhexe ah, waxa uu ku habboon yahay No.10. Waa ciyaartoy ku wanaagsan kubadda mar walba qaybta dambe oo leh xidhiidhintii ay u baahnayd United.” Ayuu yidhi Scholes.
“Khadka dhexe waxa ka dhinnayd tayadaas, ilaa intii uu yimidna taas ayuu kusoo kordhiyey. Kubadda ayuu ciyaartoyda ku quudin karaa, toogasho fiican ayuu leeyahay, waxaanu sidoo kale u muuqdaa hoggaamiye dhab ah. United way ka dhinayd taasi.” Ayuu raaciyey.
Scholes waxa uu tilmaamay halyeeyada United ee uu raadkooda hayo Bruno Fernandes, waxaanu yidhi: “Wuxuu ku ciyaari karaa laba dhexda ah, waana la arki doonaa. Waa sidii Eric Cantona, Teddy Sheringham – ciyaartoyda ayuu sidoo kale garaaci karaa, waa qof keeni kara wixii sida xun looga waayay Old Trafford, wuxuuna u muuqdaa inuu soo nooleeyay qof walba. Kooxdu si fiican bay u ciyaaraysaa, goolalna way dhalinayaan.”
“Wali Man United way dambaysaa laakiin waxay soo iibsadeen ciyaartoy cajiib ah oo u muuqda inuu isku duubay dhamaantood. Waxay haystaan koox ciyaartooyo wanaagsan laakiin uu ka dhinaa mid isbeddel samayn karaya sida David Silva ama Kevin de Bruyne ay iskugu habayn karayaan dhaqdhaqaaqa weerarka ee kooxda.
“Wali waxaan u malaynayaa in wali ay xoogaa dardar ah u baahan yihiin, waxay u muuqdeen inay wanaagsan yihiin dhowaanahan tan iyo markii uu yimid Fernandes, laakiin Liverpool iyo Manchester City ayaa waddooyinka kaga horreeya. Waxa jira saddex ama afar saxeex oo caawin kara laakiin markii ugu horreysay muddo dheer kaddib ayaad dareemaysaa inay soo yaraynayaan farqiga sare.”
Toban Sano Ka Hor Lionel Messi Iyo Kooxda Arsenal?